विदेशबाट फर्किएर क्वारेण्टाईनमा बसेका ९ जनाबाट आयो यस्ताे रिपोर्ट
Fri, Jun 5, 2020 at 8:55pm
बिहिवार, २७ चैत्र २०७६,	आहाखबर
पर्वत, २७ चैत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका ९ जनामा कोरोना संक्रमण नभएको पाईएको छ । उनीहरु सबै विदेशबाट फर्किएर क्वारेण्टाईनमा बसिरहेका व्यक्ति हुन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको थ्रोट स्वाव परिक्षणमा उनीहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको पर्वत अस्पतालका प्रमुख डा. शिशिर देवकोटाले जानकारी दिए ।
मंगलवार संकलन गरि पठाईएको स्वावको रिपोर्ट हिजो आएको देवकोटाले बताए । बाँकी ४ जनाको रिर्पोट आउन बाँकी रहेको छ । उनीहरु मोदी गाउँपालिकाका हुन् । उनीहरु पनि विदेशबाट फर्किएका नागरिक हुन ।
त्यसैगरी कुश्मा नगरपालिकका १४ जनाको पनि स्वाब संकलन गरिएको छ । उनीहरुको पनि रिर्पोट आउन बाँकी रहेको छ । आज जिल्लाको बिहादी, महाशिला र पैयुँ गाउँपालिकामा स्वाव संकलन शिविर आयोजना गरिँदै छ । जिल्लामा विदेशबाट फर्किएका सबै ३१६ जनाको स्वाव परिक्षण गर्न लागिएको डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।